Muddoharaad Ka Dhacay Ceerigaabo | Hangool News
Muddoharaad Ka Dhacay Ceerigaabo
Hangoolnews:- Subaxnimadii saaka waxa magaalada Cerigaabo ka dhacay muddoharaad xooggan oo ay iskugu soo baxeen qaar kamid ah ganacsatada daynyara ah ee ka ganacsada suuqyada magaaladaasi.
Dadkani muddoharaadka iskugu soo baxay ayaa sheegay in ganacsiyadooda ay dhibaato ku hayaan ganacsato kale oo ka soo jeeda gobolada Soomaaliya – waxay sheegeen in ganacsatadan ay ka cabanayaan ay cidhiidhi geliyeen ganacsigooda isla markaasina ay ku soo duuleen ganacsigooda.
“…nimankaasi ku soo duulay gobolka waxa aanu rabnaa in si deg deg wax looga qabto. Cid alaale ciddii ay khuseyso waxanu codsaneynaa in lanaga saaro…” ayuu yidhi mid kamid ah dadkii muddoharaadaayey oo warbaahinta la hadlay.
Dadkani ayaa sheegay in bakhaaro loo dhisay lagu wareejinaayo ganacsato kale oo ka soo jeeda qaar kamid ah gobolada Soomaaliya kuwaasi oon iyagu xaq u lahayn in ay la wareegaan bakhaaradaasi – waa sida ay sheegeen. Waxay intaasi ku dareen in ay cashuur bixiyaan taasina khalad tahay.
Geesta kale ganacsatadani ayaa cabasho sidoo kale ka muujiyey suuqa ay ku ganacsadaan oo ay sheegeen in aanay haysan dhul iyo hoy ay dhigtaan alaabta ay iibinayaan. Waxay sheegeen in ay hadda muddo shan sanno ah ku ganacsanayeen bacadka/millicda una baahan yihiin in maamulka gobolka iyo ciddii ay khuseyso gacan qabato.
Ugu danbeyntiina ma jiro war ka soo baxay maamulka gobolka oo ku saabsan cabashada ganacsatadani sheegay in ay dhibaato ku hayaan ganacsato aan gobolka ka soo jeedin.